के तपाईलाई राति निन्द्रा लाग्दैन् ? ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरु - Internet Khabar
के तपाईलाई राति निन्द्रा लाग्दैन् ? ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरु
December 18, 2017 July 28, 2018 Internet Khabar Desk
यदि तपाईहरुमा निद्रा नलाग्ने समस्या देखिएको छ भने सजग हुनहोस् । निद्रा तपाईको लािग निक्कै अपरिहार्य छ । निद्राले तपाईको दैनिकीमा मात्र हैन स्वस्थ्य र आयुमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्दछ । २४ घण्टामा तपाई ७ देखि ९ घण्टा चाँही अवश्य सुत्नुहोस् । जसले ब्रेनलगायत शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई आराम दिन्छ ।
निद्रामा ९० मिनेटको साइकल हुन्छ । पहिलो २० मिनेटलाई सुरूवाती निद्रा भनिन्छ । जुन निद्रामा हामीहरु तुरुन्तै उठ्न सक्छौं । यसलाई ‘स्टेप स्लिप’ भनिन्छ । त्यसपछि करिव ५० मिनेट गहिरो निद्रा हुन्छ । गहिरो निद्रामा पुगेपछि मानिसलाई उठाउन गाह्रो हुन्छ र साइकलको अन्तिम १०–१५ मिनेटमा सपनाहरु आउने हुन्छ । यसरी ढेड घण्टाको एउटा साइकल हुन्छ । निद्रामा करीब ५–६ वटा साइकल पुरा गर्नुपर्छ ।
यसरी निद्रा साइकल पुरा भयो भने हामी बिहान उठिसकेपछि फ्रेसको महसुस गर्दछौ । निद्रा नलाग्न कारणहरु के के हुन् रु निद्रा नलाग्ने कारणहरु धेरै छन् । शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मीक कारणले गर्दा मानिसमा निद्रा नलाग्ने हुन्छन् ।
शारीरिक कारणमा धेरै किसिमका शारीरिक रोग, टाउको दुख्ने, भोक नलाग्ने, बिभिन्न किसिमका शारीरिक पिडाहरु हुन्छन् । सामाजिक कारणमा तनावहरु जस्तै आर्थिक, पारिवारीक, व्यक्तिगत तनावले गर्दा पनि निद्रा लाग्दैन । त्यसैगरी आध्यात्मिक मानिसहरुमा योग, व्यायाम ग¥यो भने र इच्छा पूरा ग¥यो भने निद्रा लाग्ने हुन्छ । अर्को मनोवैज्ञानिक कारणहरुमा डिप्रेशन, एन्जाइटी लगाएतका रोगहरु पर्दछन् ।
अर्को निद्रा आफैमा पनि एउटा रोग हुन्छ । जसलाई इन्सेम्निया भनिन्छ । निद्रा बढी लाग्ने पनि समस्या हो रु कोही कोही मानिसमा दिउँसै निद्रा लाग्ने रोग हुन्छ । यस्ता मानिसहरु महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पनि निदाउछन् । त्यसैले चाहिने भन्दा धेरै निद्रा लाग्नुलाई नार्कोलेप्सी भनिन्छ ।
हामीहरु दैनिक ८–९ घण्टा सुत्ने गर्छौं तर नार्कोलेप्सी भएकाहरु त्यो भन्दा धेरै बढी सुत्ने हुन्छन् । साथै कोहीकोहीलाई दिउँसो निद्रालाग्ने भनेको धेरै खाना खाएपछि हो । यसमा मानिसलाई एक्कैछिन मात्र निद्रा लाग्छ र फ्रेस हुन्छ । दिउँसो निद्रा लागेर दैनिक कार्यमा धेरै असर ग¥यो भने केही औषधिहरु खानुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा यो औषधि हालसम्म उपलब्ध छैन । यदि दिउँसो निद्रा लाग्छ भने सकमेसम्म ननिदाउनु नै उचित हुन्छ । निद्रासँग सम्बन्धित कस्ता समस्याहरू देखिन्छन् रु धेरै रोगहरु निद्रासँग सम्बन्धित हुन्छ । डिप्रेशन, एन्जाइटी जस्ता बिभिन्न रोगहरुमा निद्रा नै पहिलो समस्या हो ।
डिप्रेशन, एन्जाइटी तथा अन्य मनोवैज्ञानिक रोगको पहिलो लक्षण नै निद्रा नलाग्नु हो । यसबाहेक रोगलाग्दा, चिन्ता, दुखाई, डर, मानसिक तनाव आदीका कारणले पनि निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । कुनै रोग नलागि विभिन्न कारणले मानसिक तनाव हुने र त्यसले निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ । निद्रा नलाग्ने समस्याहरु पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् । कहिले काँही थकानले सुत्न लागेपछि १÷२ घण्टासम्म निद्रा नलाग्ने वा २ देखि ३ घण्टापछि निद्राखुल्ने र फेरी निद्रा नलाग्ने हुन्छ । राती निद्रा खुलेर पुनः सजिलै लाग्छ, भने यो रोग भने होइन । निद्रामा बरबराउने किन हुन्छ र बरबराउनु रोग हो रु निद्राको साइकल हुन्छ । त्यो साइकल पार गर्दै जाँदा सपनाहरु आउने हुन्छ । सबै मानिसलाई प्रत्येक दिन सपना आउँछ तर जसलाई निद्राको समस्या हुन्छ, त्यस्ता मानिसले धेरै सपना देख्ने हुन्छ । किन भने धेरै जसो सपनाहरु गहिरो निद्रामा देखिन्छ ।
गहिरो निद्रामा आएको सपना सम्झिन सकिदैन । तर कम गहिरो निद्रामा आउने सपना मात्र सम्झने हुन्छ । त्यसैले कहिलेकाँही सपनामा आउने कुराहरु बरबराउने हुन्छ । निद्राको कारणले नै बरबराउने हुन्छ । यो रोग होइन, यस्तो समयमा मानिसलाई पनि थाहा हुदैन । यो सपनासँग आउने मात्र हो । निद्रामा दाह्रा किट्ने कस्तो समस्या हो रु यो पनि निद्रामै हुने भएको हुँदा मानिसलाई थाहा हुदैन । यो पनि रोग होइन । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुहुदैन । निद्राको समयमा ऐठन किन पर्छ रु सुतेको समयमा शरीरका अंगहरु चल्ने हुन्छ । तर कहिले काँही कुनै अंगमा प्रेसर प¥यो भने त्यस ठाँउमा राम्रोसँग रक्तसंचार हुन पाउदैन । त्यस समयमा श्वासप्रश्वास बन्द भएको जस्तो हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा चेतनमा भएपनि निद्रामा भएका कारण मानिस चल्न सक्दैन जसले ऐठन हुन्छ । अर्को कारण एउटै पोजीसनमा लामो समयसम्म सुतेमा पनि ऐठन हुने हुन्छ । मानिस चलेमा यो आफै ठिक भएर जान्छ । निद्रामा हिड्ने कस्तो समस्या हो रु यसलाई चिकित्सकीय भाषमा सोम्नबोजिम भनिन्छ । सोम्नबोजिम भनेको निद्रामा हिड्ने समस्या हो ।
व्यक्ति आफैलाई निद्रामा हिँडेको थाहा हुदैन । यो समस्या गहिरो निद्रामा नपुग्दै सपनाको कारणले हुन्छ । यस्तो समस्यामा व्यक्तिलाई गहिरो निद्राको लागि औषधि पनि दिन सकिन्छ । यस्तो समस्या भएकाहरुले झ्याल, ढोकाको चुक्कल राम्रोसँग लगाउने जस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ । यसले शारीरिक असर गदैन तर कहिले काँही दुर्घटना हुन जान्छ । निद्रा लगाउने उपाएहरु के के हुन् रु जसलाई राती निद्रा लाग्दैन त्यसले राती सुत्ने र बिहान उठ्ने समय एउटै बनाउनु पर्छ ।
निद्रा नलागेमा के गर्ने ?
एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने
चुरोटरसुर्ती सेवन नगर्ने
भोकै नसुत्ने तर हल्का मात्रै खाने
नियमित शारीरिक गर्ने
सुल्नु भन्दा पहिले करिव आधा घण्टा आराम गर्ने
निद्राको लागि औषधी प्रयोग नगर्ने
सुत्नु भन्दा पहिले मनतातो दुध वा पानि पिउने
सुत्नु भन्दा पहिले मन तातो पानीले नुहाउने
डाक्टर सुबोध पोख्रेल
आजको राशिफल – मिति २०७४ साल पुस ४ गते प्रतिपदा तिथि मंगलबार
किन हुन्छ सम्बन्ध बिच्छेद ?